UPercy Jackson: Izincwadi | Izincwadi Zamanje
Isithombe somthombo Amabhuku kaPercy Jackson: khetha incwadi
Selokhu kwaphuma amafilimu amabili okuqala kaPercy Jackson, Izincwadi zika-Rick Riordan zibe phakathi kwezincwadi ezifundwa kakhulu phakathi kwababukeli abasha. Kodwa-ke, uyazi ukuthi yibaphi bonke abakha le saga?
Uma ufuna ukwazi ukuthi kwenzekani kuPercy Jackson ngezincwadi zakhe, ngaphandle kokuthi ulinde amafilimu azokhishwa, mhlawumbe kufanele uqale ukufunda lokho esikulungiselele kona.
1 Ubani owabhala izincwadi zikaPercy Jackson
2 UPercy Jackson: izincwadi ezakha le saga
2.1 Isela Lombani
2.2 Ulwandle lwezilo
2.3 isiqalekiso se-titan
2.4 impi ye-labyrinth
2.5 Iqhawe lokugcina le-Olympus
2.6 Izincwadi ezingeziwe ku-Percy Jackson saga
Ubani owabhala izincwadi zikaPercy Jackson
Sikweleta i-saga kaPercy Jackson kumbhali URick Riordan (igama langempela uRichard Russell). Wazalelwa e-United States ngo-1964 futhi wafunda e-Alama Heights High School ngaphambi kokuya eNyuvesi yaseTexas.
Wayenguprofesa wesiNgisi nomlando, futhi nangaleso sikhathi wanquma ukufunda omunye umsebenzi, Social Studies, e-Presidio Hill School, eSan Francisco. Ngaleso sikhathi indaba kaPercy Jackson yagqama engqondweni yakhe (washada noBecky Riordan futhi baba nezingane ezimbili, uHaley noPatrick. URussell wasebenzisa izindaba zikaPercy ukuze axoxele indodana yakhe ngaphambi kokulala).
La Inoveli yokuqala yashicilelwa ngo-2006, iqala i-saga yenganekwane yentsha owayithanda kakhulu kangangokuthi akuzange kuthathe isikhathi eside ukukhipha lezi zincwadi ezilandelayo. Kuyaziwa ukuthi isihunyushelwe ezilimini ezingaphezu kuka-35, ukuthi isidayise amakhophi angaphezu kwezigidi ezingu-30 futhi isiguqulelwe kumdlalo wamahlaya, ifilimu nochungechunge.
UPercy Jackson: izincwadi ezakha le saga
Umthombo: idayari yomlingo
Mayelana nezincwadi zikaPercy Jackson kumele sithi kunamaqembu amabili: ngakolunye uhlangothi, lokho kwamanoveli ngokwawo; ngakolunye, lelo lezincwadi zesibili, Nakuba bengeyona ingxenye yendaba esemqoka, banazo izici ezithile zokuqonda kangcono indaba. Sikutshela kancane mayelana neqembu ngalinye.
Isela lombani nguye Incwadi yokuqala ka-Rick Riordan ephule indaba kaPercy Jackson. Iqala ngokwethula umlingiswa oyinhloko ophila impilo evamile eNew York. Ufunda esikoleni okuhlalwa kuso izingane ezinezinkinga kanye ne-dyslexia.
Kodwa-ke, ngolunye usuku oluhle lapho eya ohambweni oluya emnyuziyamu, uthisha wakhe ushintsha abe inunu (Ukufutheka) futhi amhlasele. Omunye wothisha uyamsindisa futhi amnikeze inkemba ukuze akwazi ukuzivikela. Ngemva kwaleso sigameko, kubonakala sengathi akekho osakhumbula lutho futhi yena ngokwakhe ufika ekungabazeni okwenzekile.
Ngakho-ke, lapho amakilasi esephelile futhi kufanele aye ekhaya kunina, uSally Jackson, futhi usingababa wakhe omubi, uGabe, umngane wakhe omkhulu, uGrover, unquma ukumphelezela.
Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, ukuphila kukaPercy kuyashintsha lapho ethola ukuthi uyashushiswa futhi kufanele afike eCamp Half-Blood, indawo lapho bengamvikela khona (hhayi esimweni sikanina). Uthola ukuthi empeleni uyindodana kaPoseidon nokuthi ngaphansi kwakhe kukhona isiprofetho: enye yamadodana ama-mestizo onkulunkulu abathathu abakhulu (uZeus, uPoseidon kanye neHayidesi) iyona ezosindisa noma ibhubhise i-Olympus phakade.
Kodwa akukhona konke okujabulisayo lapho, njengoba esolwa ngokweba, kanye noyise, umbani kaZeus, futhi uqala uhambo lokuthola umbani kanye necala langempela.
Incwadi yesibili kaPercy Jackson ivula ngomlingiswa owazi kakhudlwana uzalo lwakhe. Futhi ukuzidela kancane. Ngakho Lapho imigoqo yeCamp Half-Blood iqala ukuwohloka futhi igxile ekuhlaselweni kwe-monster, uPercy, kanye nabangane bakhe, banquma ukucinga i-Golden Fleece, okuwukuphela kwento engasindisa ikamu futhi ibuyisele ukuthula kuleyo ndawo.
Kodwa, ngenxa yalokhu, uzophinde athembele kumfowabo ngomzali oyedwa, ozalwa nguPoseidon kanye neNymph yoLwandle.
Lena kuzoba incwadi yesithathu kulo mdlalo ongakaphumi efilimini. Kulokhu, umgomo kaPercy Jackson uphathelene nokusindisa abantu ababili, u-Bianca noNico di Angelo. Ukuze enze lokhu, unabangane bakhe, u-Annabeth, uThalia noGrover, abazobhekana nezilo ezibahlaselayo. Futhi, lapho kubonakala sengathi akukho ukuphunyuka, bayosindiswa unkulunkulukazi u-Arthemisi nabazingeli bakhe.
Kodwa, ngesikhathi esifanayo, lokho kuyosho a i-adventure entsha lapho ama-allies engase angabi kakhulu futhi lapho wonke umuntu, onkulunkulu nama-demihumans, angakhela abanye uzungu ngaphandle kokwazi muntu.
Encwadini, uzothola i-demigod entsha, indodana yaseHayidesi, njengoba, njengoPoseidon, naye wazala ingane nomuntu. Futhi, ngakho-ke, kungaba enye engagcwalisa isiprofetho.
UPercy, ekhathele ukuphila njengomuntu ongenamuntu, wenza isinqumo sokubuyela ekuphileni kwakhe kwangaphambili njengomuntu ofayo. Inkinga wukuthi uma ezama ukuyithatha baphinde bamhlasele, okumenze waphoqeleka ukuthi ayithole buyela eCamp Half-Blood ukuze ufunde ukuthi i-Kronos ifuna ukuyibhubhisa ngaphakathi (ukungena nge-labyrinth kaDaedalus).
Ngakho-ke, u-Annabeth, owazi i-labyrinth, uhola umkhankaso noPercy, uTyson noGrover ukuze abavimbele ukuba bafike lapho. Abangakwazi ukuthi le labyrinth empeleni iyindawo lapho kutholakala khona izilo zezinkulungwane zeminyaka nezindawo ebezingalungiselelwanga khona.
Iqhawe lokugcina le-Olympus
Kulokhu, uPercy useneminyaka engu-16 kakade, futhi isiprofetho silenga phezu kwakhe. Okwamanje, onkulunkulu bavalelwe empini neTyphon, ishiya i-Olympus ingavikelekile.
Kuyoba uPercy okuyodingeka avikele i-Olympus kumuntu, noma unkulunkulu, ofuna ukuyibhubhisa. Kodwa kumelwe azi futhi ukuthi isiprofetho sibhekisela kubani, yena noma omunye wabangane bakhe, njengoThaliya noma uLuka.
Izincwadi ezingeziwe ku-Percy Jackson saga
Njengoba besisho, ngaphezu kwamanoveli, kukhona nezinye izincwadi ezihambisanayo ngoba zixoxa izindaba ezimfishane ngabalingiswa.
Ifayela le-Demigod. Ifundwa phakathi kwe-Battle of the Labyrinth kanye ne-The Last Olympian.
Ama-Demigods nezilo. Nakuba inesethulo sika-Rick Riordan, iqiniso liwukuthi okunye akulotshwanga nguye kodwa abanye ababhali abachaza izindawo, abalingiswa abavela ochungechungeni, eminye imilando kanye nohlu lwamagama lwezinganekwane zamaGreki.
Umhlahlandlela obalulekile. Lena kufanele ifundwe ngaphambi kwezimbili ezedlule ngoba izama ukuchaza indawo yonke kaPercy Jackson.
Ingabe uyazithanda izincwadi zikaPercy Jackson? Bangaki osufundile?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » UPercy Jackson: Izincwadi
Ubhalwa kanjani umbhalo